वडा कार्यालय आफ्नै भवनमा – Sajha Bisaunee
वीरेन्द्रनगरको गोदामलाइनस्थित ६ नं. वडा कार्यालयको भवन शिलान्यास गरिँदै
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सबैजसो वडा कार्यालयले आफ्नै भवनबाट सेवा दिइरहेका छन् । सुर्खेतका अन्य पालिकामा धेरैजसो वडा कार्यालयहरू भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । आफ्नै भवन नहुँदा बर्सेनि लाखौं रूपैयाँ भाडामा खर्च र सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुने गरेको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १६ वटा वडा छन् । जसमा वडा नं. ११ र ६ बाहेक अरू वडाहरूका आफ्नै कार्यालय भवन छन् । नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलले वडा नं. ५,९ र ३ ले गत आर्थिक वर्षमा कार्यालय भवन निर्माण गरेको बताए । त्यस्तै, वडा नं. १ र ४ मा दुई–दुई वटा कार्यालय भवन छन् । नगरको वडा नं. २, १०, १३, १४, १५ र १६ मा साविकको गाविस भवनमै वडा कार्यालय बसेका छन् । प्रशासकीय अधिकृत पौडेलका अनुसार वडा नं. ७ र ८ को समेत आफ्नै कार्यालय भवन छन् भने वडा नंं. १२ भने आफ्नै भवन हुँदा हुँदै पनि भाडाको घरमा बसेको छ ।
यसैगरी, वीरेन्द्रनगर–६ को वडा कार्यालयले भवन निर्माणको तयारी थालेको छ । उक्त वडामा सोमवार कार्यालय भवन निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ । नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन् । वीरेन्द्रनगर–६ को वडा कार्यालय गोदामलाइनस्थित खाद्य संस्थानको भवन पछाडि बनाउन लागिएको हो ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा भवन निर्माणका लागि ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोही बजेटलाई क्रमागत योजनामा राखि यो चालु वर्षमा भवन निर्माण थालिएको हो । कोरोना महामारीका अघिल्लो वर्ष बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको वडाध्यक्ष मोतिप्रसाद कँडेले बताए । ‘उक्त बजेट बजेटलाई क्रमागतमा राखी टेन्डर गरिसकिएको छ,’ उनले भने । त्यो बजेटमा ४० लाख थप गरी ७० लाख लगानीमा आठ कोठे कार्यालय भवन निर्माण गर्न लागिएको उनले जनाए ।
प्रकाशित मितिः १ भाद्र २०७८, मंगलवार ०८:४७